Sky Bagan | Shared Hosting
+95 09 400 400 805
Chat Box, Email, Viber, Remote Desktop
1 Month Money Back
No Down Time Except Server Maintenance
ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့စည်းများ၊ TU, CU ကျောင်းသူ/သားများနဲ့ Website ကို ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်တည်ဆောက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြင့် Email အသုံးပြုလိုသူများအတွက် အထူးစီမံပြုလုပ်ထားပါသည်။
99% Sever Uptime အာမခံမှုရှိခြင်း
2 ဆမြန်သည့် SSD အသုံးပြုထားခြင်း
အခမဲ့ Technical Support ပေးခြင်း
Auto Free SSL ပါရှိခြင်း
One Click Install App 300+ ပါရှိခြင်း
Email Account အကန့်သတ်မရှိ သုံးနိုင်ခြင်း
Project အများစု တင်နိုင်ခြင်း
Feature များ ကန့်သတ်မှုမရှိခြင်း
PHP Version များ စိတ်ကြိုက် မြင့်နိုင်ခြင်း
File Size Limit များ ကိုယ်တိုင် ကန့်သတ်နိုင်ခြင်း
Domain ခွဲ များစွာ တင်နိုင်ခြင်း
Two Factor Security ပါရှိခြင်း
Firewall, Spam Filter ပါရှိခြင်း
Gmail နဲ့ Webmail တွဲသုံးနိုင်ခြင်း
1 Domain (.com Free)
1 Website Upload
cPanel,3Mail Accounts
5 Websites Upload
cPanel, 10 Mail Accounts
10 Websites Upload
cPanel, 20 Mail Accounts
Unlimited Websites Upload
cPanel, Unlimited Mail Accounts
Shared Hosting အမေးများ
Shared Hosting ဆိုတာဘာလဲ?
Shared Hosting ဆိုတာက Sky Bagan မှာ ရှိသည့် Server တစ်ခုကို တစ်ခြားသော လုပ်ငန်း၊ Customer များနှင့်အတူ CPU, RAM, SSD, Bandwidth အစရှိသည့် Server Resource များကို သီးသန့်အခန့်များခွဲပြီး စုပေါင်း အသုံးပြုရသည့် Web Hosting, Web Server ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Shared Hosting သည် ရိုးရိုးသာမန် Website များ တင်နိုင်ပါမည်။
cPanel ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ?
cPanel ဆိုတာ Linux/Unix မှာ အခြေခံထားတဲ့ Web Hosting Control Panel တစ်ခုပါ။ cPanel Inc, US က ရောင်းချတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသုံးအများဆုံး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး Control Panel လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ MM Web Info ၏ Server တွင် cPanel License ပါဝင်တာကြောင့် Customer တွေအားလုံး cPanel ကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ E-mail Account ကို Create/Manage လုပ်တာ၊ MySQL Database ကို Create/Manage လုပ်တာ၊ Subdomain, Parked Domain တွကို Create/Manage လုပ်တာ၊ DNS Zone Management လုပ်တာ၊ Website ထဲကို File တွေ Upload လုပ်ဖို့ FTP Account Create လုပ်တာတွေအားလုံး လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီ Link မှာ စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်လို့ရပါတယ်။
Domain and Hosting ကို တခြား Company မှ Sky Bagan Server သို့ ပြောင်းရွှေ့လာလို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ Sky Bagan နည်းပညာအဖွဲ့မှ အစအဆုံးကူညီပေးမှာပါ။ သင်၏ Hosting အဟောင်း Account ထဲမှ File များအားလုံး၊ Database များကို Download/Backup လုပ်ပြီး သင့် Hosting မှာပြန် Upload လုပ်တာပါ။ Download/Backup လုပ်ရာတွင် သင်၏ Hosting အဟောင်းက cPanel သုံးပါက cPanel Account Transfer တိုက်ရိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သင်၏ Hosting အဟောင်းက SSH Access ရှိပါက (သို့) Files များကို Zip လုပ်နိုင်ပါက Zip လုပ်ပြီး Unzip လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ သင့်၏ Website က CMS များဖြစ်သော Joomla, Drupal, SMF, etc.. များသုံးထားပါက Configuration File ကို New Hosting Environment အတိုင်း Update လုပ်ပေးရမှာပါ။ Domain Transfer လုပ်ရာမှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ လူတော်တော်များများ မျက်စိလည်ကြတဲ့အချက်ပါ။ Domain Transfer ဆိုတဲ့ term က Domain ကို Domain Register တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းတာပါ။ အဲ့ဒီလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ လက်ရှိ Register မှာ Authorization Code လိုပါတယ်။ Domain Secret Code/Key လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Code ရပြီဆိုရင်တော့ Register ကို Transfer လုပ်လို့ရပါပြီ။
Sky Bagan is an Internet business consulting agency that is passionate about creating innovative web solutions for end users. Beingaleading web design company, it has set an industry high standard in providing custom web design and web development services to its clients. Sky Bagan is powered with highly inspired, creative, talented and dedicated professionals who are willing to put their all strengths in pursuit of professional objectives. We respect, admire and love the aptitude of our team members and motivate individuals to think outside the box. This makes our work environment lively and creative and eventually leads to greater innovations. MORE !
Live Chat with Sky Bagan
All Rights Reserved © Sky Bagan | Skysoft Co.,Ltd 2017- 2020